Zvingani 4-DHEA inoshandurwa ku testosterone? | AASraw
Zuva Rini 4-DHEA Inotendeuka Ku Testosterone?
/Blog/4-DHEA , garari/Zuva Rini 4-DHEA Inotendeuka Ku Testosterone?
Posted on 06 / 30 / 2018 by Dr. Patrick Young akanyora 4-DHEA, garari. Izvo zvine 0 Comment.
Zvose pamusoro pe 4-DHEA
2.HNUMX-DHEA Inoshanda Sei?
3.Is 4-DHEA yeProhormone
4.Chii 4-DHEA inobatsira?
5. I4-DHEA an Anabolic Steroids
6.How Kushandisa 4-DHEA?
7. Nzira yekukurudzira sei 4-DHEA madhara
8.Zvizhinji sei 4-DHEA inoshandurwa ku testosterone
9.Chii Kusiyana pakati peDHEA ne4-DHEA
I.4-DHEA powder Basic Characters:
1. Chii Chinonzi 4-DHEA?
4-DHEA powder, CAS 571-44-8, inonziwo 4-androstene-3b-ol, 17-one, 3β-Hydroxy-4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-one, 3β-hydroxy -D4-androsten-17-one, 3β-hydroxyandrost-4-en-17-imwe, 3β-hydroxy-etioallocholan-4-en-17-imwe. 4-Dehydroepiandrosterone (4-DHEA) is steroid iyo inotyisa ye 5-dehydroepiandrosterone.
4-DHEA powder inowanzoitika isiri-methylated (kwete-17AA) PRO-steroid. Kunyange zvazvo 4-DHEA inogona kukonzera kuti isrogen inenge isingakwanisi kukonzera high estrogen ine chokuita nemigumisiro yechirwere. Zvose zvinoguma zvichave zvakafanana kana kuti yekutanga 4-AD yakarambidzwa mu 2004. Nhamba dzakakwirira dzezvikamu izvi dzichabereka zvakanakira zvakakosha mumusana wemaviri, uye kuvandudzwa kunononoka musimba. Ichi chigadzirwa chinogona kubvisa chimwe chibvuru kubva ku-estrogen kutendeuka, iyo inogona kuverengwa nekutungamirira aromatase inhibitor, asi izvi zvichanyanya kukunda chinangwa chekushandisa chidimbu ichi kutanga.
zita 4-DHEA, 4-Andro, 4-AD
Storage Temp Room Temperature Temperature
ruvara Muchena kana Muchena mutsvuku mutsvuku
Delivery Time mukati meawa 12 mushure mekubhadhara
Payment Method WU, MG, BT, TT
nhuri foil bag kana maitiro
tsananguro 4-DHEA inowanzoitika isiri-methylated (kwete-17aa) pro-steroid. 4-DHEA, yakafanana neDHEA, inoda kuti 2 ishanduke kutendeuka inosanganisira 3b-HSD uye 17b-HSD kuti ichinje kuAndrostenedione / androstenediol, uye ipapo testosterone. Chii chinoita kuti 4-DHEA yakasiyana zvakasiyana neDHEA inosungirirwa kaviri muC4th panzvimbo pane 5th. Izvi zvinokonzera 4-DHEA zvishoma esrogenic nekusaita zvakananga pane reestro receptor yakafanana neDHEA yakawanikwa ichiita.
Sezvo chigadzirwa ichi chinowanzoitika uye kwete-methylated zvachose migumisiro yechirwere ichave isina kunyoroka. Zvisinei, mazinga makuru anogonawo kutungamirira kune mafuta ane ganda, acne uye kuwedzerwa kweropa. Nokuti iyi steroid isiri-17AA inofanira kuva isina hanya nayo pamusoro payo isina kunaka nehuwandu hweHDL / LDL. Nemhaka yekuti chigadzirwa ichi chinogona kutendeukira kune testosterone inogonawo kutendeukira kune DHT nemamwe 5A-kuderedza metabolites. Izvi zvinogona kushanda sepakanaka yakanaka neprogestational kana kuti isiri-androgenic mishonga inogona kuumba matambudziko ne libido kana gyno nekuda kwekushaya simba uyerogenic.
2. Ko 4-DHEA Inoshanda Sei?
Mushure mokupedza, 4-DHEA (4-Andro) inopinda muropa rako uye inoshandura kuva testosterone. Iyo kambani inotanga kuve nemafungiro akareba anbobolic, zvichikonzera kuhukuru nesimba kunowedzera apo kuwedzera yako zvepabonde motokari-kukupa iyo inoshamisa "Alpha Male Ecstasy."
3. I4-DHEA (571-44-8) Prohormone?
Chii chinonzi Prohormone?Prohormones iyo inogadziriswa sarudzo yepamusoro yehomoni yakawanikwa. Prohormones ndiwo mashizha anotorwa nemuromo. Prohormone inoreva kuti maitiro emakemikari ndeyekutanga kwehomoni. Pamusoro pavo, havakwanisi. Basa ravo nderokupararira neropa. Pamwe prohormone inoshandurwa kuva hormone, iyo inoronga mahomoni. Funga nezveprohormone kuva pro-proteine ​​inotendeukira kune proteinini yekuvandudza mutambi uye kushanda kwehutano.
4-DHEA inonzi prohormone, uye kuti ive yakajeka, 4-DHEA haisi prohormone nokuti inoda kutendeuka maviri kuti ive Testosterone. Saka, funga nezve4-DHEA sezve "pro-pro-hormone".
4-DHEA (4-Andro), inonzi prohormone inobvumira vashandi kuti vabatsirwe kubva kuDHEA pasina zvakaipa zvinokonzerwa nesrogenic kuwandisa. 4-DHEA iri DHEA inowanzoitika. DHEA, kana dehydroepiandrosterone, inonzi hormone inogadzirwa ne-adrenal gland.
Iyo adrenal gland ishungu iri pamusoro peevo. Ndiyo mugadziri mukuru wehomoni dzinokosha mumuviri wako unobatsira kutonga mahomoni ako ehutano uye cortisol. Iwe unoda mahomoni aya kuti uve nehutano hwakanaka uye hupenyu. Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha zvinokonzerwa neadrenal glands is adrenaline. Kurwisana kwako kana kuti kufamba kune ndege kune zvinetso zvinokonzera kunobva kune mahomoni anotsvaira paitsvo dzako.
Ihomoni DHEA inoberekwa ne-adrenal glands, asi uropi hunoitawo saizvozvo. DHEA inobvumira kuburitsa f androgens uye estrogen, iyo inobatsira inonyanya kudiwa neavo vanoda kuwedzera ukuru hwemasumbu uye utano hwakanaka. Sezvo muviri uripo, DHEA inogadzirwa mumuviri inoderedza. Kuderedzwa kweDHEA mumutumbi kunotungamirira kuhutachiona hweHommonal, kuderedzwa kwepabonde, uye osteoporosis.
4-DHEA inonzi prohormone inoita kuti utano hwakanaka uyerorogenic huvepo uye inogona kudzorera mazinga eDHEA mumuviri. Inoramba isingashandisi kusvikira zvirongwa zvichikonzerwa panguva yakakodzera.
4. Chii 4-DHEA inobatsira?
Pamusoro pe, 4-DHEA inobatsira tarisira kuva nemigumisiro iyi:
-Better simba uye simba
-Inowedzera mafungiro ako
Nenguva yakakodzera yezvokudya, iwe uchaona iwe uchidzoka kubva kubasa nekukurumidza iwe wawakaita kana uchienda.
Iwe uchacherechedza erections akasimba uye mamwe maasgasms ane simba. Iwe uchaona zvakare kuti iwe uchava nesimba rakawanda mubhedha.
-Non-methylated, saka chiropa chako hachibviri
Zvechokwadi, iyo miviri miviri ye4-DHEA (571-44-8) inobatsira inovandudzwa simba uye musimba kukura. Izvi ndizvo zvauri kutsvaga kuti ugadzire muviri wakanaka. Zita rechitatu ra4-DHEA rakanakisisa raizobatsira mukudzoka, nokuti ipapo iwe unogona kushanda kakawanda uye kuwana mhindu nokukurumidza.
Tsika, hongu. Asi musiyano pakati pe-steroids uye 4-andro unoita kuti urembedzwe muUnited States.Chikonzero chiri 4-DHEA, iyo zita risina rimwe re4-andro, rine mararamiro ayo muviri wedu unowanzosika.
DHEA inomiririra - edza uye inonzwika iyi iri kunze - dehydroepiandrosterone, iyo ndeimwe yezvakawandisa zvakakura steroid inogadzirwa mumuviri womunhu.
Kuburikidza nekushandura kwe enzyme, 4-andro kuwedzera kunova tsika dzechidimbu dzinenge dzapfuura nepachiropa.
Iko zvino inopinda muropa se testosterone yakazara, iyo muviri wako unoshandisa testosterone yakasikwa. Asi haisi kuparadza chiropa chako, kuchiita kuti ive yakachengeteka.
6. Ungashandisa Sei 4-DHEA?
Kune vanotanga, iwe unofanirwa kuenzanisa 4-DHEA (4-DHEA muyero) kwemavhiki 4-6, pakati pe300-500 mg zuva nezuva.
Kune vashandi vepakati pemapfupa kana mapurisa, iwe unogona kuenda kwemavhiki 6-8 uye unoenda ne 300-750 mg 4-DHEA miriyoni pazuva.
Izvi zvinofanira kuteverwa zvakasimba, nokuti 4-andro is prohormone iyo isingafaniri kuderedzwa nayo. Iva nechokwadi chokuti unonamatira kuronga kwakasimba, kusanganisira nguva uye mabhasikoro.
Mukati iyi nguva yakatarwa, unofanirwa kutarisira kuwana 8-10 mapaundi emasumbu ekukura.
Nzira yakanakisisa ndeyokuparadzanisa dhizha rako rezuva rimwe nerimwe, chikamu chimwe mu AM uye imwe muMDC.
Kana kuti, kuti zvive nemigumisiro yakanakisisa, kutora hafu yekubatsira kwako kweawa imwe usati wadzidzira uye wakarurama usati warara. Izvi zvinoita kuti hunyoro huwedzere, kukura kwesimba, nekudzoka.
7. Nzira yekudzivisa sei 4-DHEA madhara?
4-DHEA (4-Andro) ine zvishoma zvisingabatsiri migumisiro / 4-DHEA migumisiro. Iwe unogona kuve nemwana muduku isrogen kutendeuka, misumbu yakakomba, kukwirira kweropa, kushungurudza uye pane dzimwe nguva gynecomastia (gyno).
8. Zvingani 4-DHEA inoshandurwa ku testosterone?
Uyu mubvunzo wemashiripiti uyo munhu wose anoda kuziva. Asi zvinosuruvarisa, mhinduro ndeyokuti "inodaro" uye izvi zvinoreva kuti zvinonyatsoenderana nemunhu. Kana vane zvikwiriso zvinoshamisa zve aromatase saka iwe unogona kuwana imwe estradiol. Kana pane dzakawanda zvehutachiona hweHSD, unogona kuwana bump mu testosterone. Zvinonyanya kubva kune mumwe munhu, asi zvimwe zvidzidzo zvakaratidza kusvika ku 30% kutendeuka neprohormones - iyo inokosha.
Sezvo inoshanduka kuva mumakemikisi akawanda mumuviri, nzira yakanakisisa yekushandisa 4-DHEA (571-44-8) yakaita sechingwa chiduku mukati mako. 4-DHEA haifaniri kunge iine prohormone inokosha mumutambo wako. Zvinonyanya kushandiswa pamwe chete nezvimwe zvinonzi prohormones zvakadai se1-DHEA mune 2: 1 kana 3: 1 chiyero (zvichienderana nemuviri werudzi rwako - ectomorphs inofanira kushandisa 2: 1, apo mapomorphs anofanira kushandisa 3: 1).
9. Chii Chinonzi Kusiyana Pakati peDHEA ne4-DHEA
Chii Chinonzi Kusiyana Pakati peDHEA ne4-DHEA
zita DHEA 4-DHEA
Migumisiro Yepamusoro -Kukwegura-simba (simba revechiduku)
-Kunyanya kusarura (anti-catabolic)
-Immune system -Musasa mashoma (nitrogen retention)
-Bood volume (hematopoietic)
tsananguro DHEA inoonekwa se "generic" kana kuti DHEA yenguva dzose. Inogona kunyatsozivikanwa kunzi 5-DHEA, sezvo hukama huviri huri munzvimbo 5th.
DHEA yakange yakakurumbira muhuwandu hwehuwandu hwevanhu kubvira muZ1980. Inowanzoshandiswa pakukwanisa kwayo kutsigira simba uye hupenyu hwakanaka pane imwe nhamba ye 50-100mg / zuva. (1-3) Munguva pfupi yapfuura, dhea yakakwirira yeDHEA yakashandiswa kunatsiridza hutano hwemuviri nekuda kweDHEA's mild anabolic and thermogenic effects. (1, 4) Izvi zvinokonzera DHEA chisarudzo chakanakisisa chekucheka panguva yekoriori yakakosha kudya, sezvo DHEA ine mishonga yakanaka yekudzivirira zvinhu. (1, 17)
DHEA inoshandura ku testosterone pachiyero che 1%, zvisinei nokuti yakashandurwa zvakanyanya ku5-androstenediol, iyo inowanikwa iyo ine androgenic uye inobolic effects. (5-8) DHEA's thermogenic properties inobva pakutendeuka kwayo ku7-oxo-DHEA. (4)
Pamusana peDHEA ine mhedziso ine androgenic ine unyoro haikwanisi kubereka bvudzi kana kurasikirwa. Kunyange zvazvo DHEA ine zvinyorwa zvishoma zveesrogenic, inowanzobereka gyno kana zvisina kunaka isrogenic nemigumisiro. (1-3) Vamwe vashandisi vese vanoita sedentary vakataura kushungurudzika kana kurara neDHEA, iyo inogona kunge yakabatana nebasa reurourosteroid muuropi. (3) Zvisinei, izvi zvinoitikawo zvinonziwo "simba rinokurudzira" iro rinowanzoburitswa DHEA.
Nemhaka yehutano hweDHEA dzakasiyana-siyana uye huwandu hwayo hwemahomoni hunogona kushandiswa nyore nyore pakucheka, kana kuti kuchengeta hunobudirira panguva yekuoma kwemazana masvingo. 4-DHEA iri DHEA inowanzoitika. Icho chimiro chakafanana zvikuru neDHEA yenguva dzose asi kusungirirwa kaviri mune chechina 4th kunoshamisa kuchinja migumisiro yayo.
4-DHEA inoshandura nyore nyore ku4-androstenediol, panzvimbo ye 5-androstenediol, kuwedzera iyo anabolic potency kupfuura 2x kupfuura DHEA inowanzogara. (6-8, 11) 4-DHEA inotarisirwawo kuva nepamusoro ekutendeuka kwetesteresterone kana ichienzaniswa neDHEA inowanzogara. (6, 7) I4-DHEA hainawo koriori inopisa thermogenic properties, saka inopa hutori hwepamusoro hwekuchengetedza zvinokonzera. (4) Ichi chakawedzera vanabolic potency uye chakaita kuti kupisa kwechirwere kunopedzisira kuchiita kuti zvionekwe kubudirira musimba, kuonda kwematomu kukura, uye kuwedzera kuwedzera.
4-DHEA ichava neine estrogen kutendeuka iyo inogona kuve nyore kuenzanisa ne-non-aromatizing steroid ne androsterone kana 1-DHEA. Zvose zvinowanikwa zvichange zvakafanana neyekutanga "4-AD" yakarambidzwa mu 2004 Steroid Control Act.
Sezvo kune imwe DHEA isomers, 4-DHEA inowanzoitika uye isingaiti chepfu. (9) Mamwe matambudziko akadai seganda rine mafuta kana kuderedza kubereka kunoonekwa zvinyoro uye zvenguva. Nyaya inonyanya kukosha-iyo ingangodaro kubviswa kwekuberekwa kwe testosterone, izvo zvinoita kuti PCT iwane mushure mekufamba. Pasi rose 4-DHEA inonyatsochengeteka uye inobudirira inoshandiswa musimba yekuvakisa.
Kuparara kwe4-DHEA chete kunokonzerwa nehotera yakakwirira inokonzerwa nezera rakakura rinodiwa kuti rione kukosha kwekuvaka masimba.
4-DHEA (4-Andro) (inozivikanwawo se4-Androsterone - 3b-hydroxy-androst-4-ene-17-one) inonyanya kuendesa 4-Androstenediol uye 1-Androstenedione, iyo inotangira testosterone. Izvi zvinoreva kuti kuburikidza nehutatu-danho rekutendeuka, 4-DHEA ichashandura kuva testosterone mukati memuviri. Kungofanana ne1-Andro, prohormone iyi haina-methylated uye saka haina chepfu kune chiropa. Zvisinei, inobata aromatize kune estrogen, saka kushandiswa kwe aromatase inhibitor (AI) kunokosha pakushanda mabhasikoro iyi.
Nhamba yakanaka ye4-DHEA yaizove 300-750mgs zuva nezuva zvichienderana neruzivo rwomumwe munhu nekushanda kunowedzera zvinodhaka (PEDs). Nezvekukurudzirwa kwenguva yakareba, mutengi aizomhanyira kwevhiki ye 6-8. Sezvambotaurwa pamusoro apa, unofanira kushandisa aromatase inhibitor kudzivirira isrogen panguva yekufamba, pamwe chete nechimwe chinhu chekuchengetedza ropa mukati mezvinoenderana. Mushure mekushandisa 4-Andro, mini-PCT yaizodiwa. Izvi zvinofanira kusanganisira clomid pa 25mg zuva, nervadex pa 20mg pazuva, uye testosterone nyanzvi yakanaka yemasvondo e4.
1-Andro (inozivikanwawo seAndrosterone - 3b-hydroxy-androst-1-ene-17-one) inogumira steroid hormone uye inonzi weak androgen inenge ye1 / 7th ye testosterone's potency. Kana kangoziviswa mumuviri, inoshandura ku 1-Testosterone. Sezvo ichi chidimbu chisina kutendeukira kune estrogen kana DHT, hakugoni kuva neserogenic migumisiro, yakadai segynecomastia kana kuchengetwa kwemvura. Uyezve, 1-Andro haisi ye-methylated, saka inofanira kunge isina zvishoma kana pasina chekuita chechiropa zvachose, zvichiita kuti chiropa chibatsire zvizere zvisina kudiwa. Kunyange zvakadaro, zvinogoneka kuti migumisiro yebasa reropa inoratidza zviratidzo zvechiropa zvishoma.
5-DHEA (chemikemikari zita: 5-DHEA - 3b-hydroxy-androst-5-ene-17-one) ihomoni inowanzoitwa nemadonal adrenal mumuviri womunhu (kunyanya pedyo neitsvo, chiropa, uye ne ma testes ari varume). Sezvaunenge watoziva kare, DHEA inoshanda semutungamiri kumhomoni yevarume nevakadzikadzi (androgens uye estrogens), uye inoshanda nokushandura kuAndrostenedione, iyo inoshandurwa kuva testosterone.
Epi-Andro (inozivikanwawo se: 3b-hydroxy-androstane-17-one) inowanzobudiswa mumuviri ne 5a-reductase enzyme. Iyi enzyme haina kuderera kune vamwe vanhu, saka kushandiswa kwechisikigo kuchasiyana kubva pamunhu kumunhu. Apo inotorwa nemuromo, Epi-Andro inotendeuka ku dihydrotestosterone (DHT), iyo inonzi 5 nguva sey androgenic se testosterone, zvichiita kuti iyi ikamu inoshanda zvakanaka mukuwedzera kuonda kwemisimba, kusuruvara kwemasuru, simba, uye kushungurudza. Sezvakangoitika, vamwe vashandisi vakatowana kuwedzera kwekurasikirwa kwemafuta pavanenge vachishandisa prohormone iyi. Sezvo ichi chidimbu chiri "chakaoma" (kwete estrogen kutendeuka), inowanzoshandiswa patinotarisa kuwana simba uye kuonda kwemazhinji tisingawani chero kuchengetwa kwemvura.
Iyi prohormone yakasiyana yakasiyana nokuti haisi kunyange pamusika zvakadaro. Sezvinoratidzwa nezita racho, 1,4-DHEA (inozivikanwawo se: 1,4-DHEA - 3b-hydroxy-androsta-1,4-diene-17-imwe) ndiyo itsva DHEA version yekare yeBoldione prohormone yakarambidzwa mu2012. Zviviri zvezvakatarisirwa zvinotarisirwa zvechigadzirwa ichi chido chokukurudzira nekugadzirisa pamwe chete.
11. 4-DHEA (571-44-8) Kutengesa
Vanhu vazhinji vanoda kuziva nezvehutano hwakakwana uye prohormone yakakwana nokuti kune zvakawanda zvisinganzwisisiki pamusoro peiyo prohormone imwe neimwe inoshandiswa uye nei ichifanira kutorwa neimwe nzira.
Kana iwe uchida kuwedzera simba uye utano hutano, prohormones 4-DHEA inzira imwe yekubatsirwa kubva mune hutano hwakanaka uye kusvibiswa. 4-DHEA inonzi prohormone inokurudzira nitrogen kuchengetedza, simba, uye izwi rekuyerera kweropa kusvika musimba. Kuwedzera 4-DHEA kune chirongwa chako chekudzidzisa simba uye chimiro chemuviri uye zvine zvinogutsa zvinoguma nehuwandu hwemigumisiro.
4-DHEA hafu yeupenyu iri pfupi, iwe unogona kuisa iyo nechose chinenge chidimbu kana kuti vanabolic chaiyo pasina kunetseka pamusoro pemamwe matambudziko asina kufanira, asi inonyanya kuwirirana ne 1-Andro uye Epi-Andro (makemikari akaoma) sezvo izvi zvinoshanda basa rakanaka mukuderedza kana kudzivisa zvimwe kuchengetedza mvura.
Hazvisi zvakaoma kuwana 4-DHEA inotengeswa paIndaneti, AASraw (www.aasraw.com) inopa prohormone series products products raw materials, yakanaka, kukwikwidzana mutengo, yakachengeteka uye inokurumidza kushanda basa.
Tags: 4-DHEA powder, Tenga 4-DHEA powder
Zvokudya zveDoogestrel Zvakatengesa: Ongororo & Dosage & Migumisiro Iyo yakazara yakajeka sumo yeMegestrol acetate powder